ဖရိတ်ကြီးဖို့ e-book တွေ | м м ť ђ ĩ ŋ ķ є я ကိုသင်ကာ
ဖရိတ်ကြီးဖို့ e-book တွေ	Posted by mm thinker on March 20, 2008
Posted in: IT & Blogging, Sharing.	Tagged: Classic, e-Book.	Leaveacomment
Scribd မှာ လျှောက်ကြည့်ရင်း e-book တွေ တွေ့တယ်။ မျိုးစုံပဲ။ Scribd က Upload တင်တဲ့နေရာပါ။ စာကြည့်တိုက်ကြီးသဖွယ်ပါပဲ။ စာပေ (Literature) ထဲက မြန်မာတွေနဲ့ မစိမ်းတဲ့ ဂန္ထ၀င်ဝတ္တုတွေ ဒေါင်းလုဒ် လုပ်ယူဖို့ စုပေးလိုက်ပါတယ်။ တခြားသမိုင်း၊ ဒဿန၊ အင်္ဂလိပ်စာ အပါအ၀င် စာအုပ်တွေလည်း ရှိပါသေးတယ်။ စုထားတာနည်းနည်းတောင်ကြာပြီ။ အခု `လေးမ´က ငြိမ်နေပါလားဆိုလို့ နည်းနည်း လှုပ်ကြည့်တာ။ အရင်က ဆာဗာမကောင်း၊ ကော်နက်ရှင်က လိပ်နဲ့ အမျိုးစပ်နေချိန်မို့ မတင်သင့်သေးဘူးဆိုပြီး ငြိမ်နေတာ။ ကျနော်ကတော့ စာအုပ်ဆိုရင် e-book တွေလည်းပဲ ကြိုက်တာပဲ။ `မဂျစ်´တူးကတော့ e-book ကြိုက်ဘူးတဲ့။ သူက ကွန်ပျူတာရှေ့မှာ မဟုတ်ဘဲ ဇိမ်နဲ့ဖတ်ချင်တာကိုး။
အောက်မှာစုပေးထားတဲ့ အင်္ဂလိပ်မူရင်းတွေ အနက် တချို့ဆိုရင် မြန်မာဘာသာပြန်တွေ ထွက်ပြီးပါပြီ။ အရင်ကဆို အင်္ဂလိပ်စာ Class မှာ ဦးဟိန်းလတ်က သူ့မှာ Ulysses ၀တ္တုကြီးရှိကြောင်း ကြွားလိုက်ရတာ။ ခုတော့ အင်တာနက်ပေါ်မှာ ကျနော်တို့ အလကားရနေပါပြီ။ ဟိုးအရင် ဘန်ကောက်ရောက်တော့ နိုင်ငံတကာစာအုပ်အရောင်းပွဲနဲ့ အကြုံ ချားလ်ဒစ်ကင်း၊ ဂျိမ်းမ်ဂျွိုက်၊ ဂျက်လန်ဒန်စတဲ့ ကမ္ဘာကျော်တွေရဲ့ စာအုပ်တွေ အတွဲလိုက်တွေ့တော့ သွားရေကျလိုက်တာ မပြောနဲ့။ မအောင့်နိုင်လို့ ရှိတ်စပီးယားပေါင်းချုပ်တော့ ၀ယ်ခဲ့သေးတယ်။ ခုတော့ အင်တာနက်ပေါ်မှာ ဖရီးရမှန်းသိလာတော့ ဆောင်းဦးလှိုင်သီချင်းထဲကလို ကျနော်လည်း `ဖရိတ်ကြီး´ `ဖရီးကြိတ်´လုပ်ပြီး e-book တွေ နင်းကန်စုနေမိတော့တယ်။
အောက်မှာ ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန် Click ပါ။
Finnegan’s Weak by James Joyce
Parsuasion by Jane Austen
Shakespeare Library: Part I, Volume 1
Shakespeare Library: Part I, Volume 2
Women in Love by D.H Lawrance
← Seleted Writings for Vol.1, Issue.2 (April)	Close Receiving Manuscripts for April Issue →	0 comments on “ဖရိတ်ကြီးဖို့ e-book တွေ”
ဟန်သစ်ငြိမ် on March 20, 2008 at 2:58 am said:
ကောင်းတယ်ဗျာ။ တော်တော်များများ သွား ဒေါင်းလုဒ် လုပ်လိုက်မယ်။ (ဖရိတ်ကြီးရတာဆိုတော့)
Reply	layma on March 21, 2008 at 6:39 am said:
ဒီလောက်ငြိ်မ်နေတာ အချည်ကြီး..အဲလေ.. ဖရိတ်ကြီး ကြံနေလို့ကိုး…။
Reply	စိုးထက် - Soe Htet ! on March 21, 2008 at 7:09 am said:
လောလောဆယ် လေးအုပ် ဆွဲသွားတယ် … ကိုနင်ဒွိုင်း က အရင်ဆုံးပေါ့😛
Reply	စိုးထက် - Soe Htet ! on March 23, 2008 at 4:02 am said:
ထပ်လာဆွဲတယ် ဗျို့ ကုန်တော့မယ်😛
Reply	စိုးထက် - Soe Htet ! on March 23, 2008 at 4:06 am said:
The Complete Works of Shakespeare က အဆင်မပြေဘူး ဗျို့😀
Reply	Pinkgold on March 25, 2008 at 8:53 am said:
ebook link ညွှန်းပေးတာ ကောင်းတော့ ကောင်းပါတယ် ဒါပေမယ့် စာဆိုတာ ကုတင်ပေါ်မှာ ပက်လက်ကလေး ဖတ်မှ ဇိမ်ရှိပြီး ဦးနှောက်ထဲ ၀င်တာမျိုး မဟုတ်ကလား ကိုသင်ကာရဲ့
Reply	dovewhite on April 2, 2008 at 6:49 am said:
Many thanks , special thanks for ebook links,
I want to get and read these, now, it is ok because of you.
Reply	upasaka on April 5, 2008 at 2:19 am said:
သိပ်ကျေးဇူးတင်တယ်ဗျာ ရင်ထဲရှိတဲ့အတိုင်းကို ရိုးသာစွာပြောရရင် ပိုပြီးလေးစားလာတယ် စာအုပ်တွေနိုင်သလောက်ယူသွားတယ် တကယ်တော်တဲ့လူပဲ…ကိုသင်ကာဟာ …တကယ်ချီးကျူးတယ်